आत्महत्या, कानुनमाथिको विश्वास र आन्दोलनको ताप – Chitwan Post
चितवनमा गर्मीका कारण सास फेर्न मुस्किल भएकै अवस्थामा एक जना नुवाकोटतिरका शालिकराम पुडासैनी नामका सञ्चारकर्मीले नारायणगढको छेउ पोखरा बसपार्कको होटल कङ्गारूको कोठाको पंखामा झुन्डिएपछि त्यही विषयलाई केन्द्रभागमा राखेर केही नेपाली नागरिकहरुले सडकमा आन्दोलन गरे । पुलिसको भ्यानमा ढुङ्गा प्रहार गरे । पुलिसले अश्रुग्यास पड्कायो । कसको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको हो त्यो थाहा भएन, तर आन्दोलनकारीहरु भने सक्रियतासाथ लागिरहे । कसैको पनि अकालमा मृत्यु जायज वा स्वीकार्य हुन सक्दैन । शालिकरामको मृत्युलाई कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिन्न । ती एक होनहार युवा सञ्चार क्षेत्रका लागिमात्रै होइन, आवश्यकता पर्दा कोदालो चलाएर कृषिकर्म गर्न काम लाग्थे, देश रक्षाका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आइलाग्दा बन्दुक बोक्न काम लाग्थे । यतिमात्रै होइन, ती मरेर गएका युवा नेपालका लागि हरेक शीर्षकमा काम लाग्थे, तिनको मृत्युले यो देशलाई ठूलै नोक्सानी भएको छ ।
तर, उदेक लाग्दो विषय शालिकरामको जबर्जस्तीवाला आत्महत्याका लागि दोषीलाई कारबाही गर कसैले भनेन । सबैभन्दा पहिला ती पुडासैनीको न्यायका लागि आवाज उठ्नुपथ्र्यो, तर यो देशमा त के भयो भने आत्महत्याका लागि दुरूत्साहन गर्ने व्यक्तिको रुपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरुमध्ये कुनै एक जना लामिछाने थरका रविलाई निर्दोष भन्दै रिहाइका लागि आन्दोलन गरियो । अर्का दुई जनाको विषयमा पनि खासै उच्चारण गरिएन । न्याय माग्ने वा न्याय दिने काम दुई पक्षको कुरा सुनेपछिमात्रै हुन्छ वा न्यायका लागि देशमा न्यायालय स्थापना गरिएको छ, जहाँ कहिल्यै अन्याय हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । नेपालको न्यायिक प्रणालीअन्तर्गत आजसम्मको अभ्यास के हो भने प्रहरीले छानबिन गर्छ, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ, अदालतले दोषी वा निर्दोष जे हो त्यो निर्णय गर्छ । दोषी ठहरिए कानुनबमोजिम जेल वा जरिवाना तोक्छ, होइन भने निर्दोष भन्छ छाडिदिन्छ ।
अब उल्टा प्रक्रिया कहाँनेर भयो भने शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्दा उनको परिवारमाथि बज्रपात भयो । तिनका आमाबा कति रोए होलान्, आजसम्म कसैले सोचेनन् । तिनको श्रीमतीको मन कति छियाछिया भयो होला, कसैले अनुमान गरेन । स्वयम् शालिकरामलाई पनि खुसी र सुखी जीवन बिताउने इच्छा थियो होला, जब कि संसारका मानवबीच आज पनि यही बताइन्छ कि आत्महत्या कसैको रहर हुन सक्दैन । यसरी व्याख्या गर्दा यो भन्न कठिनाइ हुन्न कि दुःखकष्ट र क्षति पुडासैनी परिवारलाई भएको छ, तर त्यो पुडासैनी परिवारको दुःखकष्टलाई कसैले सम्बोधन गरेको देखिएन । सुरूआत नै कहाँबाट गरियो भने रवि लामिछाने हाय हाय, उनी निर्दोष छन् । यो प्रक्रिया बिलकुल उल्टो प्रक्रिया हो । रवि निर्दोष छन् वा दोषी छन् भन्ने कुरा छानबिन र अनुसन्धानले पत्ता लाग्छ, जुन काम नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ । एकथरी मान्छेले के बुझ्न जरूरी छ भने रवि निर्दोष छन् भन्ने भावना व्यक्त गर्ने सम्मानित नेपाली नागरिकहरुको भनाइलाई नकारात्मक ढङ्गले उपेक्षा गर्न जरूरी छैन । नेपाल प्रहरीले ससम्मान भन्नुपर्छ कि “अनुसन्धान जारी छ, दोषी र निर्दोष अदालतले निर्णय गर्छ ।” फेरि रविका फ्यानहरुलाई यस्तो लागेको देखिन्छ कि हो न हो रविलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले उनका विरोधीहरुले फसाउँदैछन् । फेसबुकका पेजहरुमा पोस्ट गरिएको चित्रसहितको भनाइलाई हेर्दा यस्तो भन्न खोजिएको देखिन्छ कि उनलाई फसाउन प्रचण्ड, उनकी छोरी रेनु, चितवन प्रहरी प्रमुख दानबहादुरलगायत अन्य केही सक्रिय छन् । यसलाई यसरी बुझ्न उपयुक्त हुन्छ कि नेपालमा यतिबेला प्रचलनमा रहेको फेसबुकमा साँचो वा झूटो जे पनि पोस्ट गर्न पाइने अवस्थालाई सदुपयोग गरिएको हो ।
प्रचण्ड यो देशमा दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली नागरिक हुन् । यी नागरिकले भारत र चीनजस्ता आजका आर्थिक समृद्धिको पखेँटा जडान गरेर चन्द्रमातिर उड्दै गरेका देशसँग आफ्नो क्षमताअनुसार सम्बन्ध कायम गरे । आजको विश्वमा जहाँ–जहाँ नेपाललाई चिन्छन् त्यहाँ प्रचण्डलाई चिन्ने गरिन्छ । हो, यिनको नेतृत्वमा सञ्चालित उ बेलाको जनयुद्ध भनिएको सशस्त्र आन्दोलनलाई मन नपराउनेहरुले यिनलाई “ज्यानमारा युद्धको नाइके” भन्छन् । अनेक अनेक आरोप पनि लगाउँछन्, यो छुट्टै पाटो हो । तर, बुझ्नैपर्ने विषयचाहिँ के हो भने यी प्रचण्ड त्यति तल्ला विचारवाला मानिस होइनन् कि जसले कुनै एउटा सञ्चारकर्मीलाई षड्यन्त्र गरेर फसाऊन् । आजसम्मको उनको राजनीतिक भूमिका र विगतमा प्रधानमन्त्रीको उच्च तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गरिसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा त्यति उच्च स्थानमा पुगिसकेको मान्छेले कुनै एक नागरिकलाई फसाउने काममा दिमाग खर्च गर्ने फुर्सद पाउन सक्दैनन् र उनले कुनै पनि हालतमा त्यसो गर्दैनन् भन्न सकिन्छ । तर, सडकबाट उनीमाथि लगाइएको आरोपलाई एक कोणबाट साँचो हो भनिदिने हो भने यो दुनियाँमा प्रचण्डजत्तिको बुद्धि नभएको मान्छे अरु छैन भनिदिए हुन्छ । कहाँको प्रचण्ड दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले रिस पोख्ने एउटा सञ्चारकर्मीमाथि, सोच्दा पनि हाँसो लाग्छ र हाँसो खप्न गाह्रै हुन्छ !
अब रह्यो झूटा मुद्दाको प्रसङ्ग । राणाकालमा नेपालमा पुलिस, सेना, अदालत, शासक, राजा, प्रधानमन्त्री जे भने पनि राणाहरु नै थिए । त्यो बेला न्याय वा अन्याय जे भने पनि राणाहरु नै थिए । न्याय गर्थे तिनै गर्थे । अन्याय गर्थे तिनै राणाहरु गर्थे । तर, जब राणा शासन सकियो, जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुने चलन चल्यो तब न्यायमा सुधार आउन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा अदालतले राम्रै न्याय दिन थाल्यो, यद्यपि राजामहाराजाहरुबाट अदालत प्रभावित हुन्थ्यो भनौँ वा अदालतको निर्णय राजाले बदर गर्न मिल्ने अवस्था थियो । त्यो व्यवस्थामा अचाक्ली विरोधी व्यक्तिलाई झूटा मुद्दा लगाएर जेलमा कोचिन्थ्यो । पञ्चायत मरेपछि आएको बहुदलीय व्यवस्थामा मन नपरेका र विरोधीहरुलाई झूठा मुद्दा लगाउने चलनमा निकै कमी आयो । यो व्यवस्थामा पनि झूठा मुद्दा त लगाइन्थ्यो तर औधी कम संख्यामा ।
पछिल्लोपटक राजनीतिक परिवर्तनले देशमा गणतन्त्र ल्याएको छ । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था अहिले परीक्षणकालमा चलेको जस्तो देखिन्छ । यसले जरा गाड्न बाँकी नै छ । यतिबेला जनता निकै जागरूक छन् । सञ्चार जगत्को उपस्थिति निकै दह्रो छ । यस्तो अवस्थामा कसैले चाहेर कसैलाई झूठा मुद्दामा फसाउन सक्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । र पनि, कथंकदाचित् कसैले झूठा मुद्दा लगाएर कसैलाई फसाउने प्रपञ्च रच्यो भने त्यसको परिणाम भयानक हुने अवस्था देखिन्छ । षड्यन्त्रकारीको कुनै पनि बेलामा पर्दाफास हुनपुग्छ । यसकारणले पनि यतिबेला झूठा मुद्दा लगाउने र कुनै निर्दोषलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले फसाउने विषय कल्पनाबाट निकै टाढा हुन गएको छ ।
विज्ञान र प्रविधिको विकासले अबको विश्वमा कसैले कसैलाई केही लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । हत्या, आत्महत्या, प्रोत्साहन, दुरूत्साहन सबै पत्ता लगाउन अब कठिनाइ छैन । पुलिसले बेइमान गरे जिल्ला अदालत छ । जिल्ला अदालत न्यायमा कतै चुक्यो भने पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि न्याय मिलेको महसुस नभए सर्वोच्च अदालत छ । न्यायका लागि यतिविघ्न ढोकाहरु खुला छन् । यतिबेला अन्याय होला कि भन्ने चिन्तामा कोही डुब्न जरूरी छैन । तर, पनि विवेकशील नेपाली नागरिकहरुले के बुझ्न जरूरी छ भने मानवसंसार त्यस्तो संसार हो जहाँ नबोल्ने वा बोल्न नसक्नेहरुले न्याय पाउँदैनन् । यहाँनेर पनि रवि लामिछाने र युवराज नामका युवालाई साथ दिन वकिलहरु तम्तयार देखिएका र घटनामा मुछिएकी एक अस्मिता कार्की नामकी युवतीलाई कसैले सहयोग गर्न रूचि नदेखाएको बुझिएको छ । मृतक पुडासैनीसँग उनको के खालको सम्बन्ध थियो ? उद्देश्य र योजना दुईबीच के थियो ?
खासमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका शालिकराम, रवि र युवराज नामका तीन युवाको बीचमा ती युवती कसरी जोडिन आइपुगिन् ? अब ती युवतीको भोलिको जीवन कसरी बित्ने हो ? उनको जीवनरक्षा र पालनपोषणको जिम्मेवारी लिन घरपरिवारमा कोही छन्/छैनन् ? कतै तिनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने अवस्था त होइन ? ती युवतीलाई न्याय दिने सवालमा खोइ आजसम्म कोही बोलेका, किन छैनन् ? देशमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीहरुले “हाम्रो रवि हाम्रो देश” भनिरहँदा ती युवतीले मनमनै के सोचिन् होला ? अरुका पक्षमा मान्छे बोल्छन्, मेरो पक्षमा मात्रै कोही रहेनछन् भनेर तिनले पक्कै सोच्नेछिन् । जसले मेरो कोही छैन भन्ने सोच्छ उसले जीवनको मोह त्याग्छ । यो गम्भीर विषयमा आजसम्म यो देशका मै हुँ भन्ने विद्वान्हरुले किन सोचेनन् ? अन्याय कसैलाई हुन हुन्न । जहाँ अन्याय हुन्छ विद्रोह र क्रान्तिको बीउ त्यहीँ रोपिन्छ र त्यहीँबाट क्रान्तिको सुरूआत भएर शक्तिशालीहरु बढारिन्छन् । विश्व मानव इतिहासले यही बताएको छ ।
त्यही इतिहासलाई साक्षी राखेर यतिबेला भन्दा पुडासैनी आत्महत्या काण्डमा अन्याय स्वयं शालिकराम पुडासैनीलाई भएको छ । खाऊँखाऊँ र लाऊँलाऊँको उमेरमा शालिकरामले यो संसारलाई छाडेका छन् । यो उनको इच्छाविपरीत हो । उनको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको छ । सबैभन्दा पहिला उनले न्याय पाउनुपर्छ । दोसोमा उनका बाआमा र श्रीमतीलाई अन्याय भएको छ । तिनले न्याय पाउनुपर्छ । अब रह्यो कुरा रवि, युवराज र अस्मिताको । यिनीहरु अनुसन्धानको घेरामा तानिएका मात्रै हुन् । दोषी भए अदालतले सजाय दिन्छ । निर्दोष भए सम्मानित अदालतले रिहा गर्छ । अदालतको निर्णय नै न्याय हो । अन्याय होइन । यति भन्दाभन्दै पनि बिट मार्नुअघि यत्ति लेख्न बिर्सनै हुन्न कि यो देशमा मात्रै होइन संसारको कुनै पनि देशमा निर्दोष मान्छे दोषी घोषित नहून् । दोषीलाई मात्रै थुन्न जेल बनाइएको हो, निर्दोषलाई होइन ।